Landscape Mwenje | Akatungamira Wall Washer | Akatungamira Pool Mwenje | xLedLight.com
Inground Mwenje Mwenje
Akatungamira Pool Mwenje
Cnc Mashini Mwenje
LED Wall Washer Landscape Mwenje Akatungamira Pool Mwenje
LongNor Optoelectronics Co, Ltd. iri kutungamira Landscape Mwenje, LED Wall WasherFlexible Led Linear inogadzira & mutengesi yakavambwa muna2008 nevashandi vanopfuura mazana maviri iri muSenzhen China. Zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kushandiswa chechi chiedza, magetsi emagetsi, hotera yekushongedza mwenje, mwenje wekugara, mwenje wekutengesa pamwe nemwenje yemagetsi. Kambani yedu yakatanga kugadzira LED neon flex, LED strip Lights, inochinjika ye LED mutsara panguva yekutanga kuvandudza panguva ya2008-2011. OEM & ODM masevhisi akapihwa. ine rakasimba uye nehunyanzvi R & D timu ine makore echiitiko pane LED mwenje tekinoroji & zvigadzirwa, izvo zvinogona kuvimbisa hwaro hwakanakisa uye hwakareba hupenyu Isu tinopawo mwenje mhedzisiro dhizaini. Yedu Tsime Mwenje Mwenje, Inground Mwenje Mwenje, Dziva re LED Mwenje, Muchindwe Miti, Zvichienderana akatungamira Strip, Cnc Mashini Mwenje pamwe ne CE, RoHS, FCC, TUV, SAA, ISO9001 yakavimbiswa.
Muchindwe Kumwenje Mwenje
48W Palm Tree Up Mwenje yakanakira dzimba, mahotera, makirabhu emunyika, mabhizinesi zvivakwa, mapaki uye angangoita ese emichindwe ekuvhenekesa mafomu. Inogona kushandiswa seinosimudza muchindwe, pasi mwenje kana ese ari maviri panguva imwe chete. Mwenje-yakafanana nemwenje kuvhenekera miti yemichindwe usiku, Vheneka nyika yako! Nehukuru hwakasiyana hwehupamhi uye mawatts kubva ku12W-72W Palm Tree Up Mwenje Zvese zvinhu zviri aruminiyamu uye hazvizoregi kusiya muti usina kukuvadzwa IP65 isina mvura, Girazi rakadzikama AC100-250V kana AC / DC 24V CREE 3030 LED Mukati Mechena Inodziya, Natural chena, Kutonhorera Ichena, Tsvuku, Girinhi, Bhuruu, Yero, Goridhe, RGB Shanduko, DMX512 8, 15, 30,60 mwenje wedanda mwenje unowanikwa
Miti yeMichindwe Mhete Mwenje
Mwenje yakaita semhete kuvhenekera miti yemichindwe usiku, Palm Tree Ring Mwenje dzakanakira dzimba, mahotera, makirabhu emunyika, mabhizinesi zvivakwa, mapaki uye angangoita ese emuchindwe anovheneka mashandisirwo. Inogona kushandiswa seinosimudza muchindwe, pasi mwenje kana ese ari maviri panguva imwe chete Nehukuru hwakasiyana dhayamita uye watts kubva ku12W-72W Zvese zvinhu zviri aruminiyamu uye hazvizoregi kusiya muti usina kukuvara IP65 isina mvura, Girazi rakapfava AC100-250V kana AC / DC 24V CREE 3030 LED Mukati Mudziya Yakachena, Yakachena chena, Yakachena Chena, Tsvuku, Girinhi, Bhuruu, Yero, Goridhe, RGB Shanduko, DMX512 8, 15, 30,60 mwenje danda kona inowanikwa
Palm Tree Kuvhenekesa Mhete
Mhete dzakagadzirwa nemhete dzekuvhenekera miti yemichindwe usiku, Palm Palm mwenje yekuvhenekesa yakanakira dzimba, mahotera, makirabhu emunyika, zvivakwa zvebhizinesi, mapaki uye angangoita ese emuchindwe anovheneka mashandisirwo. Inogona kushandiswa seinosimudza muchindwe, pasi mwenje kana ese ari maviri panguva imwe nehukuru hwakasiyana dhayamita uye watts kubva pa12W-72W Palm miti yekuvhenekesa mhete.Zvose zvinhu zviri aruminiyamu uye hazvizoregi kusiya muti usingakuvadzi IP65 isina mvura, Girazi rakatsamwa 100V kana AC / DC 250V CREE 24 LED Mukati Mudziya Yakachena, Yakachena chena, Yakachena Chena, Tsvuku, Girinhi, Bhuruu, Yero, Goridhe, RGB Shanduko, DMX3030 512, 8, 15 mwenje wedanda mwenje unowanikwa
Bindu Spike Chiedza
Bindu Spike Chiedza, Kana mamiriro emwenje ari kupenda neine mwenje, saka gadheni spike Mwenje ndiwo mabrashi. Spike spotlights anoshandiswa kusimbisa mwenje wekunze - kudaidza kune chaiwo mapurani kana enzvimbo maficha. Kusiyana nemarambi emafashama anovhenekera munzvimbo yakatambanuka, mwenje ine matanda matete kuitira kuti vatarise chinhu chimwe panguva.
Inground Uplight AS Nhevedzano
Inground Uplight, Akatungamira Inground Mwenje & mamiriro ekuvhenekesa mwenje fekitori muChina, kugadzira kwekunze LED Spotlight, Akatungamira Wall Washer, Tsime Mwenje Mwenje
Inground Mwenje AR Series
Inground Lights AR Series uye AR COB Series, AR inogona kusarudza kubva pamadhigirii masere kusvika pamadhigirii makumi maviri edanda kona. Asi AR COB mune 8 degree yakatarwa uye yakafara danda kona. Iyo inoshandisa kune akasiyana nzvimbo nzvimbo.
Akatungamira Inglight Mwenje AE Series
Akatungamira Inground Mwenje & mamiriro akatungamira mwenje fekitori muChina, kugadzira kwekunze LED Spotlight, Akatungamira Wall Washer, Tsime Mwenje Mwenje
In-ivhu mwenje mwenje AD Series
Inground mwenje mwenje & mamiriro akatungamira mwenje fekitori muChina, kugadzira kwekunze LED Spotlight, akatungamira Wall Washer, Tsime LED Mwenje
Akatungamira Wall Wall Washers WW15 Series
Akatungamira Wall Wall Washers WW15 Series ndiyo inotevera chizvarwa chemadziro emashini akateedzana akagadzirwa nekuwedzera kuita, kushanda, mwenje kuburitsa, uye mamwe marongero sarudzo. Iwo WW15 akateedzana akakodzera ekunze ekuwacha madziro zvikumbiro uye inogona kudzorwa zvakazvimiririra pasina DMX controller yemavara akareruka uye mavara-anochinja mhedzisiro. DMX kudzora inosarudzika kune epamberi mwenje mapurogiramu uye chaiwo mavara. Magetsi anoshanda muDC24V, 120V kana 277V AC hardwire mafomu.
Wall Washer akatungamira WW10 Series
Wall Washer LED WW10 Series ndicho chizvarwa chinotevera chemasheru washer akateedzana akawedzera pamwe nekuwedzera kuita, kushanda, kuburitsa mwenje, uye mamwe marongero sarudzo. Iwo WW10 akateedzana akakodzera ekunze ekuwacha madziro zvikumbiro uye inogona kudzorwa zvakazvimiririra pasina DMX controller yemavara akareruka uye mavara-anochinja mhedzisiro. DMX kudzora inosarudzika kune epamberi mwenje mapurogiramu uye chaiwo mavara. Magetsi anoshanda muDC24V, 120V kana 277V AC hardwire mafomu.
Wall Washer Mwenje WW8 Series
Iyo WW8 Series ndicho chizvarwa chinotevera chemadziro ewasher akateedzana akagadzirwa nekuwedzera kwekuita, kushanda, kuburitsa mwenje, uye mamwe marongero sarudzo. Iwo WW8 akateedzana akakodzera ekunze ekuwacha madziro zvikumbiro uye inogona kudzorwa zvakazvimiririra pasina DMX controller yemavara akareruka uye mavara-anochinja mhedzisiro. DMX kudzora inosarudzika kune epamberi mwenje mapurogiramu uye chaiwo mavara. Magetsi anoshanda muDC24V, 120V kana 277V AC hardwire mafomu.
Akatungamira Wall Washer WW7 Series
Iyo WW7 ndiyo inotevera chizvarwa chemadziro emashamba akateedzana akawedzera pamwe nekuwedzera kuita, kushanda, kuburitsa mwenje, uye mamwe marongero sarudzo. Iwo WW7 akateedzana akakodzera ekunze ekuwacha madziro zvikumbiro uye inogona kudzorwa zvakazvimiririra pasina DMX controller yemavara akareruka uye mavara-anochinja mhedzisiro. DMX kudzora inosarudzika kune epamberi mwenje mapurogiramu uye chaiwo mavara. Magetsi anoshanda muDC24V, 120V kana 277V AC hardwire mafomu.
Swimming Pool Mwenje
Swimming dziva mwenje & nzvimbo LED mwenje mwenje fekitori muChina, kugadzira kwekunze LED Spotlight, akatungamira Wall Wall Washer, Tsime LED Mwenje, Ichi chinhu mumakwikwi chaizvo mutengo ne6W, 9W, 12W, 15W, 18W uye 24W Swimming dziva magetsi.
In-pasi Pool Mwenje
In-pasi Pool Mwenje & mamiriro akatungamira mwenje fekitori muChina, mugadziri wekunze LED Spotlight, akatungamira Wall Washer, Simba rekushambira
Par56 LED Dziva Remwenje
Isu tine matatu marudzi ePar3 akatungamira mwenje edziva ane akasiyana zvinhu. Inogona kuve yekudzivirira kure muRGB yekurota kara kana kuirega ichinje ruvara otomatiki. Yakareba hupenyu hwakareba iine makore matatu garandi
Akatungamira Pool Mwenje A Akateedzana
Mwenje dzePuru dzeMadziviriro dzinozivikanwa nekugona kwazvo, Mhando dzakasiyana dzemavara dzinogona kuburitswazve pasina kuda kushandisa mamwe mafirita. Mwenje dzeMadziva e LED dzakasimba kwazvo uye huwandu hwenhambo dzavanodzimwa uye nekuenderera mberi, chiito chinowanzoitika mukati memwenje yemvura, hachinei nehupenyu hwavo hunobatsira. Tinogona kuwana chero ruvara tichishandisa iyo DMX512 controller musanganiswa.
Akatungamira Flexible DRL Chiedza Bar
Akatungamira Flexible DRL Mwenje Bhar Patent chinhu. Iyo hukara nyoka chimiro chimiro, Osram 5050 LED mukati. inogona kukotama paunoda. Yakasarudzika chitarisiko dhizaini, dhizaini inofuridzirwa ne "gluttony nyoka" Kuiswa kweBendable, inotora inopinza LED yakakwira-simba mwenje sosi, mwenje wemwenje unotora lens yekondenser yechiedza chakasimba kubuda, dhizaini yakasarudzika, inogona kukomberedzwa madigiri makumi matatu ekumisikidza munzira dzakasiyana; Iyo yakafara renji yakakodzera kune yakaoma yekumisikidza chinzvimbo chemota; iyo yekumashure yakarongedzwa nepamusoro-maviri-mativi ekunamira anogona kunamirwa, uye iwo maviri mativi emwenje muviri ane zvigaro zvine sikuruu maburi ekuvharira screws. Mutumbi wemwenje wakavharwa uye hauna mvura. Giredhi risina mvura IP360
COB LED Mwenje Bhara
COB LED Mwenje Bhara, Chips pane aruminiyamu bhodhi, hwakareba hupenyu hwakareba uye yakaderera mwenje kudzikisira, Iyo luminescence yakafanana kwazvo, inodzivirira maziso, uye haisi kupenya
240V LED Neon Linear - Linear inoshanduka mwenje mwenje wekunze kwekuvaka kwekuvhenekesa ine yakanyatso kufanana uye isina dot isina mwenje pamusoro. Iyo hunyanzvi hwakaunzwa neiyi miviri saizi inokwenenzverwa mwenje mitsara yakavhura mikova mitsva mukuvhenekera dhizaini iyo yanga isingasvikike nechero zviedza zvino shure. Yedu ye LED neon mutsara inokurumidza kuwana kucherechedzwa kwemwenje dhizaini nyanzvi uye nyanzvi dzemunda - kazhinji dzinoteedzerwa, dzisina kumboenzana.
110V LED Neon Linear. Mumakore apfuura, isu takaunganidza zvinongedzo uye mazano kubva kune vanogadzira mwenje, vagadziri, mainjiniya. takagadzira Ruvara rwechokwadi. Ruvara rwechokwadi mwenje we LED uchishandisa nyowani polyurethane encapsulation tekinoroji inopa IP67 ingress chengetedzo inosanganiswa pamwe neakanakisa kududzira kweiyo LED spectrum, ichidzivirira chero shanduko yeCCT: Yechokwadi Ruvara. Inowanikwa mune maviri akasiyana. Yekutanga inonzi Top View inotora iwo maficha akafukidzwa neyakatangira kune 2D inokotama yakatarisa kune yakajeka nzvimbo. Musiyano wechipiri unotambanudza miganho yekugadzira mwenje nekupa yakajeka mwenje mwenje iyo inogona kumonyaniswa kana kukomberedzwa mumatatu matatu (2D) kuitira kuti vatevedze chero makakombama aripo mumazuvano ekuvaka mazano. Ose ari pamusoro
Cnc Mashini Ekushanda Mwenje
CNC Machine Basa Mwenje inovimbisa makore ekushanda pasina kugadziridzwa kwemitengo yakadzikiswa, kuvandudzwa kwekuonekwa kweyekuona kwevanhu kuongorora, uye kunotungamira mukuvandudzwa kwemhando yechigadzirwa uye negoho. Mwenje ye LED inoshandura zvirinyore fluorescents yekuvandudza mashandiro emahofisi uye kudzoreredza kutsiva, kugadzirisa uye huwandu hwesimba remagetsi. CNC Machine Mashandiro Mwenje, maindasitiri mwenje kugadzira uye muchina chishandiso zvinoshandiswa. Isu tinosona maindasitiri muchina akatungamira mwenje webasa akakodzera nharaunda dzakaoma dzemashopu emuchina. tubular style, Yakapetwa dhizaina rinorema basa maUSL magetsi anogara akasimba uye akakodzera kumashini yekuwachisa nharaunda - husinga gadzike nemvura, oiri, kutonhodza uye mamwe makemikari. Yese yekumisikidza inotsvedza mabhureki inobvumira nyore kuisa mwenje yekushanda muCNC muchina webasa zviteshi. Kana iwe usingaone iyo CNC Mashini Anoshanda Chiedza icho
Maviri mativi CNC Machine Lighting
Maviri mativi CNC Mashini Mwenje inovimbisa makore ekushanda pasina kugadziridzwa kwemitengo yakadzikiswa, kuvandudzwa kwekuonekwa kwekutarisa kwevanhu, uye kunotungamira kune yakagadziriswa mhando chigadzirwa uye negoho. Mwenje ye LED inoshandura zvirinyore fluorescents yekuvandudza mashandiro emahofisi uye kudzoreredza kutsiva, kugadzirisa uye huwandu hwesimba remagetsi. Maviri mativi CNC Machine Chiedza, maindasitiri mwenje kugadzira uye muchina chishandiso zvinoshandiswa. Isu tinogadzira maindasitiri muchina akatungamira mwenje webasa akakodzera nharaunda dzakaoma dzemashopu emuchina. tubular style, Yakapetwa dhizaina rinorema basa maUSL magetsi anogara akasimba uye akakodzera kumashini yekuwachisa nharaunda - husinga gadzike nemvura, oiri, kutonhodza uye mamwe makemikari. Yese yekumisikidza inotsvedza mabhureki inobvumira nyore kuisa mwenje yekugadzira muCNC muchina basa zviteshi. Kana iwe usingaone iyo CNC Machine Inoshanda
Tube yakatungamira CNC Mashini Ekushanda Mwenje
Tube LED CNC Machine Mashandiro Mwenje inovimbisa makore ekushanda pasina kugadziridzwa kwemitengo yakadzikiswa, kuvandudzwa kwekuonekwa kweyekuona kwevanhu kuongorora, uye kunotungamira kune yakagadziriswa mhando chigadzirwa uye negoho. Mwenje ye LED inoshandura zvirinyore fluorescents yekuvandudza mashandiro emahofisi uye kudzoreredza kutsiva, kugadzirisa uye huwandu hwesimba remagetsi. Tube yakatungamira CNC Machine Mashandiro Mwenje, maindasitiri mwenje kugadzira uye muchina chishandiso zvinoshandiswa. Isu tinosona maindasitiri muchina akatungamira mwenje webasa akakodzera nharaunda dzakaoma dzemashopu emuchina. tubular style, Yakapetwa dhizaina rinorema basa maUSL magetsi anogara akasimba uye akakodzera kumashini yekuwachisa nharaunda - husinga gadzike nemvura, oiri, kutonhodza uye mamwe makemikari. Yese yekumisikidza inotsvedza mabhureki inobvumira nyore kuisa mwenje yekugadzira muCNC muchina basa zviteshi. Kana iwe usingaone iyo CNC
Akatungamirira Lamp For CNC Machine
Akatungidza Lamp Kune CNC Machine, B0012-22WL44 ine CE EMC chitupa. Yakagadzikana, isina-kudzima-cnc yemuchina chishandiso mwenje, Iyo CNC Mashini LED Lamp inovimbisa makore ekushanda pasina kugadziridzwa kwemitengo yakadzikiswa, kuvandudzika kuoneka kwekutarisa kwekuona kwevanhu, uye kunotungamira mukuvandudzwa kwemhando yechigadzirwa nekugadzirwa. Mwenje ye LED inoshandura zvirinyore fluorescents yekuvandudza mashandiro echiteshi chebasa uye yakadzora kutsiva, kugadzirisa uye huwandu hwesimba remagetsi. Mwenje yemuchina wemagetsi eCCC michina, yekugadzira maindasitiri ekugadzira uye muchina chishandiso zvinoshandiswa. Isu tinosona maindasitiri muchina akatungamira mwenje webasa akakodzera nharaunda dzakaoma dzemashopu emuchina. tubular style, Yakapetwa dhizaina rinorema basa maUSL magetsi anogara akasimba uye akakodzera kumashini yekuwachisa nharaunda - husinga gadzike nemvura, oiri, kutonhodza uye mamwe makemikari. Yese yekuwedzera inotsvedza
Kujekesa kwemazuva anotevera Laser Lighting kana OLED Lighting?
Zuva: 24 / 08 / 2018
Ikozvino pane maviri emhando dzemhando dzakasimba dzezvigadziridzo zvigadzirwa: LED, OLED. Mazuva ano ma LED ari maduku zvikuru muhukuru (anenge imwe mamita mita mamita) uye akajeka zvikuru. Kuva yakagadzirwa pamusoro ...
Chiziviso cheKambani Zita Shanduko
Zuva: 04 / 06 / 2018
Vadiwa Vanokosha Vateereri, Vatengesi, uye Bhizinesi Partner; Kubudirira kwaJune 2th 2018, tinofara kuzivisa kuti tiri kuchinja zita rekambani yedu ku: LongNor Optoelectronics Co, Yakatemerwa Yedu ...
Nzira Inoenda kune ramangwana rekurima-Tambo chiedza chetambo
Zuva: 15 / 12 / 2016
Apo chido chedu chokushandisa magetsi chinoramba chichiwedzera, ndizvo zvakaitawo kuziva kwedu kudiwa kwekuwedzera kukwanisa kwayo. Imwe nzvimbo iyo iyo yega yebhizimisi yakange isingakwanisi kushanda ...
Zuva rekujekesa kwe LED
Chiedza Chinobudisa Mucherechedzo (LED) inofadza semiconductor inoshandura magetsi kuva chiedza. Chiedza che LED chave chiripo kubva kune 1960s, asi chiri kungotanga kuonekwa munzvimbo yekugara marke ...
150 lumen per watt Led Tube magetsi
150 lumen per watt Led Tube magetsi - Kwete kuti pane chakaipa nechinhu chekare chine mwenje. Kubudisa zvinenge zvese chiedza chavo pahutambo hwekuvhara pedyo nepamusoro pekunzwisisa kwevanhu ...
Hot Spring Club hotel Lighting Engineering Design
LED Neon Flex yeCheredzi Nyeredzi Imwe Kushongedza Mwenje
Kutenga Mall Chivako Chigadzirwa Chiedza
LED Neon Flex yeBingo Casino
LED Neon Flex yeBingo Casino ...
Kufanana nesu on Facebook
Tarisirei isu paYouTube
Wedzera: LiHe Industrial Zone, NanShan, ShenZhen, China
Copyright © 2007-2021 LongNor Optoelectronics Co, Ltd. Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa